Sheikh somaliyeed oo masaajid imam ka ahaa ayaa lagu dilay Columbus Ohio. – ASM Raage
Sheikh somaliyeed oo masaajid imam ka ahaa ayaa lagu dilay Columbus Ohio.
Posted byabdullahi87 December 24, 2021 December 24, 2021 Posted inwararka somaliga ah
Waxaa la waayey sheikh maxamed hassan adan ilaa maalintii arbacadda ahayn ee taariikhdu ku beegnayd 12-22-2021. Sheikhu waxa uu imam ka ahaa masjid abuu hurreira oo ku yaala magaaladda comlumpas oo ku taala gobalka somaalidu badantahay ee ohio dalka Mareykanka. sida ay sheegeen qoyska iyo xubno ka tirsan Jaaliyadda Soomaaliyeed sheikha ayaan gurigiisa ku soo laaban kadib markuu aaday masaajidka si uu salaadda subax usoo tukado.
Baaritaano socday ku dhawaad mudo ​​48-saacadood ah oo bulshada oo dhami ka qayb qaadatay laguna baadi goobayay Sheekh Maxamed ayaa sahlay in ay gaarigiisii laga helo isgoyska Joyce iyo wadada 17-aad ee dhanka Waqooyi ee magaalada Columbus Ohio.
Baabuurka dhexdiisa ayaa laga helay meydka Imaamka la la’aa ee Sheekh Maxamed Xasan oo ay ku yaalaan dhow
r xabadood oo jirkiisa ah Allaha u naxariistee.
Waxaa sidaasna lagu wargeliyey Booliska Columbus oo markii dambe goobta soo gaaray.
Sheekh Maxamed Xasan Aadam ayaa la waayay Arbacadii 7-dii fiidnimo xilliga Soomaaliya, waxaana markii ugu dambeysay lagu arkay Masjidka Al Hureyra. Ohio waa gobalka labaad ee ay ku noolyihiin somalidda ugu badan dalka maraykanka marka laga reebo Minneapolis.
Imaam Sheekh Maxamed Xasan wuxuuganacsade caan ka ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus, OH. Geeridiisu waxay noqon doontaa mid naxdin u leh qoyskiisa iyo Jaaliyadda Muslimiinta Columbus.
Su’aalaha iyo jawaabaha viisooyinka